Class Code : SFU-DBME-03-01 (Online)
SFU Professional Diploma in Business Management & Entrepreneurship Online Course
SFU Professional Diploma in Business Management and Entrepreneurship မှာဘာတွေလေ့လာသင်ကြားရမှာလဲ?
Business Manager တစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် Entrepreneur တစ်ယောက်အနေနဲ့ Finance, Business resources, Accounts, Human resource, Purchasing, Marketing, Stock control, Office organization and control, Communications စသည့် တစ်ခြားအပိုင်းများစွာ တို့မှာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီပရိုဂရမ်ကတော့ လက်ရှိ လုပ်ငန်း အသီးသီးမှာ ရှိနေတဲ့ မန်နေဂျာတွေကိုသာမက၊ လုပ်ငန်းခွင်သစ် စတင်ဝင်ရောက်မည့်သူများအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ အနာဂတ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ လုပ်ကိုင်လည်ပတ် နိုင်စေအောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စီးပွားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါမှမဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းတွင်ကိုင်တွယ်စီမံရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲလာရာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော စီးပွားရေးဈေးကွက်တွင် မိမိလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရန် လေ့လာမှု အတွက်အချိန်ပေးသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတိုးတက်မှုရှိစေလိုသည့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ အရာရှိများ၊
SFU Professional Diploma in Business Management and Entrepreneurship အဓိက ဘယ်လိုModule တွေသင်ကြားရမှာလဲ?
Module 1 - Business Management Essentials
Module2- Functional Management
Module3- Creative Entrepreneurship & Business
*ICM Business Management & Administration Old Student - ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (Save)